San Htun's Diary: ဘိုလီးဘီးယားသွား တောလား - ၃
၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ ၇ ကြသပတေးနေ့ မနက် ၆ နာရီ ဟိုတယ်ကနေ ချက်ကောက်လုပ် ဟိုတယ်က စီစဥ◌်ပေးတဲ့ တက္ကစီစီး။ လေဆိပ်က နာရီဝက်လောက်ပဲ ဝေးတယ်။ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးက မနေ့ညက ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေ တအားများ လမ်းတွေပိတ် ကားတွေမပြေးလို့ မနေ့ညက အိမ်မပြန်ရဘူး ဟိုတယ်မှာအိပ်ရတယ် ကိုယ်တို့တက္ကစီနဲ့ လမ်းကြုံလိုက်တယ်။ လမ်းတွေရှင်းလို့ လေဆိပ်ကို ခန့်မှန်းထားတာထက် စောစောရောက်တယ်။ မနေ့က အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် လာပါ့ဇ်ကိုရောက်လာလို့ ဆန္ဒပြသူတွေ တအားများတယ်။ ဒိုင်းနမိုက်သံတွေ တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ တကယ်လန့်စရာကြီး။ လေဆိပ်ပိတ်မှာစိုးရိမ်နေတာ လေဆိပ်ဖွင့်တယ်ဆိုမှ နည်းနည်းစိတ်အေးရတယ်။ လေဆိပ်က ပြည်တွင်းလေဆိပ်မို့လို့လား မသိဘူး ရန်ကုန်လေဆိပ်လောက် မခမ်းနားဘူး။ လာပါ့ဇ်မှ မိုးမျှော်တိုက်တွေ မရှိပေမဲ့ ရန်ကုန်လောက် အမှိုက်မရှိဘူး သန့်ရှင်းတယ်။ စေ◌ျးဆိုင်တွေတွေ့ပေမဲ့ လုံခြုံရေးဖြတ်ပြီးတော့မှပဲ ဝင်ကြည့်မယ်လို့တွေးတာ လုံခြုံရေးဖြတ်ပြီးတော့ အဲ့ဒီဆိုင်တွေကို ဝင်လို့မရတော့ဘူး။ ထွက်ပြီးရင် လုံခြုံရေးတခါဖြတ်ရမှာမို့လို့ မသွားတော့ပါဘူး ဘယ့်နှယ့်ဟာပါလိမ့်။ လေဆိပ်အများစုက လုံခြုံရေးဖြတ်ပြီးရင် ဂျူတီဖရီးဆိုင်တွေ ပေါမှပေါ။ ဝိုင်းက အီသီယိုးပီးယားလေဆိပ်မှာလည်း အဲ့ဒီလိုတဲ့ လုံခြုံရေးဖြတ်ပြီးရင် ဘာဆိုင်မှမရှိတော့ဘူး။ တချို့ဆို စေ◌ျးဝယ်ကောင်းလို့ ချက်ကင်ဝင်တာနောက်ကျတာတွေတောင် ဖြစ်တယ်။ အီသီယိုးပီးယား လေကြောင်းလိုင်း ဘိုးအင်း ၇၄၇ ပျက်ကျတုန်းက တယောက်ဆို ချက်ကင်ဝင်ဖို့ ငါးမိနစ်နောက်ကျသွားလို့ လေယာဥ◌်ပေါ်မတက်ခိုင်းဘူး။ အဲ့ဒါကပဲ သူ့အတွက် ကံကောင်းသွားတယ် လေယာဥ◌်ပေါ်ပါသွားရင် သေမှာ။ BOA ဘိုလီးဘီးယားလေကြောင်းလိုင်းဟာ အချိန်မမှန်၊ လက်ကေ့အိတ်တွေ နောက်ကျမှရောက်တယ်လို့ နာမည်ကြီးတယ်။ တချို့လေယာဥ◌်တွေရင် သေးလွန်းလို့ ကျပ်ညှပ်နေတာပဲဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတွေတွေ့ဖူးလို့ ဝိုင်းကို ပြဖူးတယ် လျှော့မဖြစ်သွားရအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရအောင်လို့။ ပီရူးနိုင်ငံ lima လင်မာကိုသွားမဲ့လေယာဥ◌်ခရီးစဥစဥ◌်ကို ဖျက်သိမ်းတာကို ဘုတ်မှာတွေ့လိုက်တော့ နိုင်ငံတကာလေယာဥ◌် ‌ေ ခရီးစဥစဥ◌်တွေကို ဖျက်သိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း အမှန်ပဲပေါ့။ ကိုယ်တို့အီးတစ်ကဒ်‌ လေယာဥယာဥ◌်လက်မှတ်မှာ လေယာဥ◌်ထွက်ခွာချိန်က မနက် ၈ နာရီ ၄၀၊ ဂူဂယ်မှာ ပြတာက ၈ နာရီ ၃၀၊ တကယ့်လေယာဥ◌်လက်မှတ်မှာက ၈ နာရီ ၂၀။ ဝိုင်းပြလို့ ကိုယ်တို့တွေ ရယ်လိုက်ကြတာ ဒါမျိုး ဘိုလီးဘီးယားမှာပဲ ဖြစ်တယ်ထင်ပါရဲ့။
လေယာဥ◌်စောင့်နေတုန်း ဆိုင်အားလုံးကို လျှော့ပင်းထွက်တယ်။ အရုပ်လေးတွေ ဝယ်ချင်ပေမဲ့ သိပ်မကြိုက် ဟန်က လက်ဝတ်ရတနာတွေ ကြည့်ပေမဲ့ သိပ်မကြိုက်။ နောက်ဆုံး မဖြစ်မနေဝယ်လေ့ရှိတဲ့ စေ◌ျးအပေါဆုံး ပို့စ်စကတ်ဝယ်မယ်ဆိုတာတောင် ကြိုက်တာမတွေ့ပါဘူးဆို။ စကင်္ာပူဆို ဘာမှမရှိတဲ့နိုင်ငံပေမဲ့ တိုင်းပြည်တိုးတက်တော့ လိုချင်စရာ ဝယ်ချင်စရာကြီးပဲ။ ဘိုလီးဘီးယားမှာ သဘာဝအရင်းအမြစ်၊ ယဥ◌်ကျေးမှုအမွေအနှစ်၊ ရိုးရာအဝတ်အစား အမှတ်တရပစ္စည်းလုပ်မယ်ဆိုရင် လုပ်စရာကြီးပဲ။ တိုင်းပြည်မတိုးတက်တော့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကနေ ပိုက်ဆံရအောင် မလုပ်နိုင်ဘူး နှမြောစရာပဲ။ ဆိုင်းဘုတ်မှာ လေယာဥ◌်ထွက်ခွာချိန်က ၈ နာရီ ၄၀ လို့ ထပ်ပြောင်းလိုက်တော့ မအံ့ြသတော့ပါဘူး မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့။ ၉ နာရီလို့ ထပ်ပြောင်းလိုက်တော့ စိတ်ပူလာပြီ။ Uyuni ယူရီနီကို တနာရီပဲဆိုတော့ ၁၀ နာရီရောက်မယ်။ လေဆိပ်ကနေ တိုးဂိတ်ကို ၁၀ မိနစ်လောက်ပဲ ဝေးတယ် တိုးက ၁၀ နာရီခွဲထွက်မှာဆိုတော့ မှီပါ့မလား လက်ကေ့အိတ်တွေ ပါပါ့မလား စိတ်ပူနေရပြီ။ ယူရီနီကိုသွားမှာ နိုင်ငံခြားသားကြီးပဲ အာရှသားလို့ထင်ရတဲ့ လူလေးယောက်၊ ဘိုလီးဘီးယားနိုင်ငံသား လေးယောက်လောက်။ လေယာဥ◌်ခက စေ◌ျးကြီးတော့ ဘိုလီးဘီးယားနိုင်ငံသားတွေက ဘတ်စ်ကားပဲစီးကြတယ်။ ဘတ်စ်ကားက ‌စေ◌ျးသက်သာပေမဲ့ တညလုံးစီးရမှာ မလွယ်ဘူး။ ယူရီနီလေယာဥ◌်ကွင်းက တကယ့်လွင်တီးခေါင် ဘာအပင်မှမရှိဘူး ခြောက်ကပ်နေတာပဲ ရာသီဥတုပူတယ်။ ကိုယ်တို့ထိုင်ခုံက နောက်ဆုံးကနေရေရင် ဒုတိယတန်းမှာ။ ခရီးအရမ်းသွားရတဲ့ စကိုင်းမန်ဘာဝင် ဝိုင်းဝယ်ရင် လေယာဥ◌်ထိုင်ခုံကောင်းကောင်းရတာ ဒီတခါတော့ နောက်ဆုံးတန်းနားမှာရတယ်။ ရလည်းကိစ္စမရှိပါဘူး တနာရီပဲဟာကို ပိုက်ဆံသက်သာဖို့က အဓိက။ နောက်တန်းကလူတွေက နောက်ဖက်ကနေတန်းစီနေလို့ ဝင်တန်းစီတယ်။ တံခါးက နောက်ဆုံးနဲ့ရှေ့ဆုံးကနေ နှစ်ပေါက်ဖွင့်တယ်။ လေဆိပ်ကို လမ်းလျှောက်သွားရတယ် နေရောင်အင်မတန်ပြင်းလို့ နေကာမျက်မှန်ထုတ်တပ်ရတယ်။ လက်ကေ့အိတ်စောင့်ရင်း အိပ်သာဝင် အလုပ်သမားတွေ လက်နဲ့သယ်လာတဲ့ လက်ကေ့အိတ်တွေက ကိုယ့်အိတ်တွေလားလို့ကြည့်။ ကိုယ့်အိတ်က နောက်ဆုံးမှရောက်လာတယ် ‌ေ‌ြသာ် အရင်လိုပါတယ်ဆိုမှ နောက်ဆုံးမှရတယ်။ တိုးဂိတ်ကို ၁၀ မိနစ်လောက် မောင်းရတယ် တက္ကစီခ ဘိုလီးဘီးယားနို ၁၀ တောင်းလို့ ၆ ကျပ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ စစ်ကြည့်တာ မရဘူး။ ဝိုင်းက စပိန်လို စေ◌ျးမဆစ်နိုင်တာနဲ့ ၁၀ ပေးလိုက်တော့တယ်။ တိုးမှာ ချက်ကင်ဝင်တော့ တိုးဂိုက်က တယောက်ရေသန့် ၂ ပုလင်း ဝယ်ရမယ် သဲကန္တာရမှာ ဘာဆိုင်မှမရှိဘူး လိုတာအကုန်ဝယ်ထားတဲ့။
တိုးဂိုက်က အရပ်အပုဆုံးလူရှေ့ထွက်ဆိုတော့ ဝိုင်းထွက်တယ် ‌ယောကျာ်း‌လေး‌တွေက
လှဲအိပ်ပြီး လက်‌တွေ‌ေမြှာက် မိန်းက‌‌လေးတွေကလည်း လက်‌တွေ‌မြှောက်
ဝိုင်းက ခြေထောက်နဲ့ ဖိနင်း‌တော့မှာမို့လို့ ကိုယ်တို့တွေက လက်‌တွေနဲ့ကာနေတဲ့ပုံ
တိုးဂိုက်ညွှန်တဲ့အတိုင်း နှစ်ဘလောက်အဝေးက ဆိုင်တွေကို ဝင်ကြည့်။ စေ◌ျးဆိုင်နှစ်ဆိုင်လောက်ကို ဝင်မေးကြည့် စနည်းနာလိုက်တော့ စေ◌ျးကအတူတူပဲ။ ရေသန့် ၆ ပုလင်းတဖာ အလေးကြီးသယ် အရေးထဲ တိုးဂိတ်နေရာကို မမှတ်မိလို့ ရမ်းသမ်းသွားကြည့်လိုက်တာ မှန်သွားတယ် တော်ပါသေးရဲ့။ ယူရီနီက မြို့သေးသေးလေး ဖုန်တအားထူတယ်။ လိုတာတွေအကုန် ကျောပိုးအိတ်ထဲထည့် မလိုတာတွေကားပေါ်တင်။ ကားကလေးဘီး တိုရိတာရေ့ဖိုး ကိုယ်တို့အုပ်စုမှာ ဗြိတိသျှသူသုံးယောက်နဲ့ ကားဒရိုင်ဘာ။ ဗြိတိသျှသူတွေက အသက် ၂၆ နှစ် နှစ်ယောက်က တောင်အမေရိကတိုက်ကို နှစ်လခရီးထွက်နေတာ တယောက်က ခုမှရောက်လာတာ သူငယ်ချင်းတွေ။ တိုးဂိုက်က တနေရာမှာ ဒေါ်လာလဲဖို့ရပ်ပေးတယ် ဒေါ်လာ ၂၀၀ လဲတယ် တဒေါ်လာကို ဘိုလီဘီယာနို ၈ ကျပ်။ ပထမဆုံးသွားရောက်တဲ့နေရာက ရထားသချိင်္ုင်း သိပ်မကြိုက်ပါဘူး ဓာတ်ပုံထဲမှာလှတယ်လို့လဲ မမြင်ဘူး။ ကိုယ်တို့အုပ်စုက ကားသုံးစီး တိုးဂိုက်တယောက် ပေးထားတဲ့အချိန်စေ့ပေမဲ့ ကိုယ်တို့ကားပေါ်က ဗြိတိသျှမလေးတွေ ရောက်မလာလို့ စောင့်ရသေးတယ်။ ဒီလောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့နေရာမှာ ဘာလို့ကြာနေတာလဲ မသိဘူး။ ဒုတိယသွားရောက်တဲ့နေရာက ဆားတွေထုတ်တဲ့ရွာလေး တစ်နှစ်မှာ လေးလလောက်ပဲ ဆားထုတ်လို့ရတယ်တဲ့။ ဆားထုတ်လုပ်တာကို ရှင်းပြတယ် ဆားပြတိုက်ရှိတယ် ဆားထုပ်လေးတွေရောင်းတယ်။ တိုးဂိုက်က တယောက်တကျပ် အလှုငွေထည့်ဖို့ပြောတယ်။ ဆားထုတ်လေးတွေ ဝယ်ချင်ပေမဲ့ သယ်ရမှာလေးတာရယ်၊ လက်ကေ့ထဲမှာ နေရာမရှိတာရယ်ကြောင့် မဝယ်တော့ဘူး။ သူတို့ဆားထုတ်တာ သိပ်မခက်သလိုဘဲ ဆားတွေတက်လာတာကို ကျုံးလိုက်ရုံပဲ။ ဒီနေရာက အတော်ကြီးတဲ့ဆားကွင်းကြီး ဟိုးနှစ်သန်းပေါင်းများစွာက ပင်လယ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းက မရမ်းကွင်းဖက်က ဆားကွင်းတွေကို ရောက်ဖူးတယ်။ မြေပြင်ထက်နိမ့်တဲ့ကန်ထဲ ရေငန်တွေသွင်း၊ ရေငန်တွေခမ်းလို့ ဆားပွင့်တွေကျန်ခဲ့တာကို ကျုံးယူ။ အဲ့ဒီလိုအထပ်ထပ်အခါခါလုပ် ဆားကွင်းက အင်မတန်ပူတယ်။ အဖေ့ကို ဆားလုပ်ငန်းအကြောင်း မေးကြည့်ဥ◌ီးမယ် အဖေက ဗဟုသုတကြွယ်တယ်။ ဆားကွင်းပြောင်ပြောင်မှာ အိမ်သာသွားဖို့ မလွယ်ဘူး သွားချင်ရင်ခုသွားထားကြလို့ တိုးဂိုက်ကမှာထားလို့ အိမ်သာဆီပြေးကြတယ်။ မျက်စိတဆုံး ကျယ်ပြောတဲ့ ဆားကွင်းဖြူဖြူကြီး ဟော်လန်နိုင်ငံလောက် ကြီးတယ်တဲ့။ အောက်မှာ မြေအောက်မြစ်စီးဆင်းနေလို့ ဆားကွင်းမှာ ကားမောင်းရတာ အန္တရာယ်များတယ်။ ဒေသခံတွေကတော့ မြေပျော့တာကို သိတယ်။ မိုးရာသီဆို ရေတွေနဲ့ reflection ဖြစ်လို့ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပိုလှတယ် ဒါပေမဲ့ အန္တရာယ်များလို့ ခုလိုဆားကွင်းအနှံ့‌ မောင်းလို့ မရဘူးတဲ့။
Darkar ဆိုတဲ့ ဆားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်။ ဘာလဲဆိုတာ တိုးဂိုက်က ရှင်းပြပေမဲ့ မေ့သွားပြီ။ နိုင်ငံပေါင်းစုံက အလံတွေတွေ့တယ် မြန်မာအလံတော့ မတွေ့ဘူး မြန်မာနိုင်ငံအခုအလံကို မကြိုက်ဘူး။ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အနီ အာဖရိကနိုင်ငံအလံတခုနဲ့ တူတယ်။ ဘိုလီးဘီးယားအလံလည်း အဝါ၊ အစိမ်း၊ အနီ။ ကိုယ်က မြန်မာနိုင်ငံအလံအဟောင်းကို ကြိုက်တယ် အမေရိကန်အလံကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ နေ့လည်စာစားတယ် စားမကောင်းဘူး ကားပေါ်မှာထိုင်ခုံ၊ စားပွဲ၊ ထီး၊ အိုး၊ ပန်းကန်၊ ဇွန်း၊ ခရင်း၊ အစားအသောက် အကုန်သယ်ရတယ်။ သဲကန္တာရ လွင်တီးခေါင်မှာ ဘာလူနေအိမ်၊ ဘာဆိုင်မှ မရှိဘူး မျက်စိတဆုံး အဖြူရောင်ဆားကွင်းပဲ မြင်ရတယ်။ ရေကို တအားမသောက်ရဲဘူး ရှူးရှူးပေါက်ချင်ရင်ဒုက္ခ ကွင်းပြောင်ပြောင်မှာ ဘာအပင်မှမရှိဘူး။ ခဏကြာတော့ တိုးဂိုက်က ဓာတ်ပုံရိုက်နည်းသင်ပေးတယ်။ တိုးဂိုက်ရိုက်ပေးတဲ့ပုံကကောင်းပြီး ကိုယ့်ဘာသာရိုက်တာ တပုံမှအကောင်းမရဘူး။ တိုးဂိုက်ကိုသွားခေါ်တော့ သူ့မှာလည်း အကုန်လုံးကိုရိုက်ပေးနေတော့ လက်မလည်ဘူး။ အလွယ်ကူဆုံးက ဘေးလွယ်အိတ်၊ ဥ◌ီးထုပ်ပေါ် တက်နေတဲ့ပုံ။ ပီရူးနိုင်ငံ တီတီကာကာရေကန်မှာ ဝယ်လာတဲ့ လာမားရိုက်လေးကိုချ လူကအဝေးမှာနေ လာမားရုပ်လေးကို တက်ခွစီးနေတဲ့ပုံ၊ ရေသန့်ဗူးကို မှီနေတဲ့ပုံတွေ ရိုက်ကြတယ်။ တိုးဂိုက်ရိုက်ပေးလို့ ကင်မရာကြည့်နေတဲ့ပုံ၊ ဟန်က ကိုယ်နဲ့ဝိုင်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့ပုံ အင်မတန်ကောင်းတယ်။ တိုးဂိုက်က အုပ်စုထဲမှာ ဘယ်သူအရပ်အပုဆုံးလဲတဲ့ ဝိုင်းကရှေ့ထွက်တော့ ဝိုင်းကို‌ေ‌ြခထောက်‌‌‌မြှောက်ခိုင်းတယ်။ ကိုယ်တို့က အဝေးကနေ လက်တွေမြှောက် ယောကျာ်လေးတွေက ပက်လက်အိပ်ပြီး လက်‌မြှောက်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ဝိုင်းက ကိုယ်တို့အားလုံးကို ‌ေ‌ခြထောက်နဲ့ဖိနင်းတော့မလို၊ ဝိုင်းကနောက်ဆုံးကနေ အပုဆုံးဖြစ်အောင်ထိုင် တဖြည်းဖြည်း မြင့်သွားတဲ့ပုံ၊ အားလုံးခုန်တဲ့ပုံ အိုင်ဒီယာ အင်မတန်ကောင်းတယ်။ တိုးဂိုက်က ချိန်ကိုက်တွက်ချက်ပြီး စည်းတွေနေရာ‌ေတွ သတ်မှတ်တယ် တယောက်ချင်းစီထွက် ခုန်ပေါက် တိုးဂိုက်က အချက်ပြလိုက်ရင် အော်ဟစ်ပြီး ပြန်ပြေးကြတယ်။ ဗွီဒီယိုထဲမှာ ကိုယ်တို့က အာလူး‌ကြော်ဗူးထဲကနေ ထွက်လာကြပြီးခုန်ပေါက် ဂေါ်ဇီလာလိုက်လို့ အာလူး‌ကြော်ဗူးထဲ ပြေးဝင်ကြ။ နောက်ခံတီးလုံးက ကိုယ်တို့ကားပေါ်က ဗြိတိသျှမလေးရွေးပေးတဲ့ နာမည်ကြီးဗြိတိသျှတီးဝိုင်းရဲ့ ဆူညံပေါက်ကွဲလွန်းလှတဲ့သီချင်း။ အဲ့ဒီဗွီဒီယို အတော်ကောင်းတယ် ဒီလိုမျိုး ယူရီနီမှာပဲရိုက်လို့ရတယ်။ နောက်သွား‌‌ရောက်တဲ့နေရာကတော့ Isla Incahuasi (Fish Island) ပါ။ သဲကန္တာရမှာပေါက်တဲ့အပင်တွေချည်းပဲ တောင်ထိပ်မရောက်ခင် လှည့်ပြန်ကြတယ်။ ဝိုင်းက အဆင်းကြောက်တော့ အဆင်းမှာကြာတယ်။ ကိုယ့်ကို တောင်ထိပ်တက်ချင်တက်နော်လို့ ပြောပေမဲ့ တောင်ထိပ်ကနေ မြင်ရမဲ့ရှုခင်းက သိပ်မလှဘူး ဘာမှမထူးခြားဘူးလို့ထင်လို့ မတက်တော့ဘူး။ နောက်တော့ နေဝင်ဆည်းဆာကြည့်ဖို့ Pia Pia ကျွှန်းကိုသွားတယ်။
နေဝင်သွားရင် အေးလာလို့ အနွေးထည်တွေယူဖို့ တိုးဂိုက်ကမှာတယ်။ မှန်ပါတယ် နေဝင်သွားတာနဲ့ အေးလာတော့တာပဲ။ သဲကန္တာရဆိုတော့ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲမြန်တယ် နေ့လည်ပူပြီး ညဖက်အေးတယ်။ နေဝင်ဆည်းဆာချိန်ဟာ ဘယ်နေရာမဆို လှ‌နေတာပဲ။ တခါတလေ အိမ်ပြန်ချိန် တိမ်တောက်နေတာနဲ့ကြုံရင် ကောင်းကင်ကို ငေးကြည့်နေမိတော့တာပဲ။ ဘိုလီးဘီးယားဝိုင်၊ အာလူးကြော်၊ ချိတ်စ်ကျွှေးတယ်။ အာလူးကြော်မကြိုက်တဲ့ကိုယ်တောင် ဗိုက်ဆာလို့ အာလူးကြော်ကောင်းတယ်ဆိုပြီး စားနေတော့တာပဲ။ ဝိုင်က နည်းနည်းသောက်ကြည့်တာ ပြင်းလို့ မသောက်တော့ဘူး။ ကိုယ်က ဝိုင်ချိုချိုလေးတွေကြိုက်တယ် သူငယ်ချင်းတွေဆုံရင် သောက်ပေမဲ့ တခွက်လောက်သောက်ပြီး မူးနေတတ်တယ်။ နည်းနည်းသောက်ပြီး များများမူးတတ်တယ် မူးရင်အိပ်ပျော်သွားတော့တာပဲ။ နောက်နေ့ ခေါင်းတွေကိုက်ခဲနေတာကို မကြိုက်ဘူး။ ကိုယ်တို့တည်းတဲ့ဟိုတယ်က ဆားတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်။ ကိုယ်တို့သုံးယောက် တခန်းရတယ် ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာတွဲလျက်။ ရေက နေ့လည်ကနေပူချိန်နဲ့ နွေးနေတယ် ည ၁၀ နာရီကျော်ရင် ရေပူမရတော့ဘူး။ ကိုယ်ရေချိုးတဲ့အချိန်မှာ ရေပူမရှိတော့ဘူး ရေအေးပေမဲ့လည်း ရေချိုးချင်တာနဲ့ အအေးဒဏ်ကိုသည်းခံပြီး ချိုးရတယ်။ ရေရှားတဲ့ဒေသမို့လို့ ရေကိုချွှေတာပါတဲ့။ ညစာထမင်းစားတော့ အုပ်စုလိုက်ရိုက်တဲ့ပုံတွေ ဘယ်သူ့ဆီမှာရှိလဲလို့မေးပြီး AirDrop ကနေ ရှယ်ကြတယ်။ သူတို့က ဓာတ်ပုံတွေကို သိပ်ဂရုစိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တွေအတွက်က ဓာတ်ပုံကအသက်။ နံရံကိုထိလိုက်ရင် ဆားလေးတွေကွာကြလာတယ်။ ဝိုင်းက အသက်ရှူလို့မဝလို့ အိပ်မပျော်ဘူး ကိုယ်ရောပဲ ကားပေါ်က ဗြိတိသျှမတွေလည်း အဲ့လိုပဲတဲ့။ မနက်စာမစားခင် ဟိုတယ်ပတ်ဝန်းကျင် တပတ်ပတ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းမဲ့နေရာလေးတွေ ရှာကြည့်တယ်။ လွင်တီးခေါင်ပြင်ကြီး မလှဘူး။ မနက်စာစားတော့ နွားနို့ထင်ပြီး ကော်ဖီထဲထည့်လိုက်တာ ငှက်ပျောသီးဖျော်ရည်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ တိုးရစ်အားလုံးနီးပါး အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ဗြိတိသျှတွေ မဖော်ရွေဘူး စကားမပြောချင်ကြဘူး။ ဗြိတိသျှလူမျိုးဖြစ်ပုံမရတဲ့ စုံတွဲတတွဲနဲ့ တယောက်တည်းခရီးထွက်လာတဲ့ ဘယ်လဂျီယမ်နိုင်ငံသားကတော့ ဖော်ရွေတယ်။ အရင်တုန်းက ဗြိတိသျှအသံထွက်ကို ကြိုက်ပေမဲ့ ခုတော့ မကြိုက်တော့ဘူး။ ပျော့ပျောင်းတဲ့ အမေရိကန်အသံထွက်ကို ပိုကြိုက်တယ် အမေရိကန်တွေက ပိုဖော်ရွေတယ်။ ကျွှန်းတကျွှန်းမှာ သောင်တင်နေတဲ့ ဗြိတိသျှနှစ်ယောက် သုံးနှစ်နေတာတောင် တယောက်ကိုတယောက် စကားမပြောကြဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူမရှိလို့ဆိုတဲ့ ဟာသလေးကိုပြောပြီး ဗြိတိသျှတွေ မဖော်ရွေတဲ့အကြောင်း ဝိုင်းနဲ့အတင်းတုတ်ကြတယ်။ နောက်နေ့မှာတော့ ဘယ်ကိုသွားလည်သလဲဆိုတာကတော့ နောက်ပို့စ်မှပဲ တင်ပါတော့မယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၀။
တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ကြိုးစားရိုက်ကြတယ်
Isla Incahuasi (Fish Island)
Sunset at Pia Pia Island
ဘိုလီဘီးယန်းဝိုင်၊ အာလူးကြော်နဲ့ ချိတ်စ်
All New Yorkers are under quarantine now!!!
Wash hands! Stay Home!
ပီရူးသွား ‌‌တောလား - ၆
Short Essays (8)
မွဳိ ကန္စြန္းရြက္ ခ်ဥ္ရည္ဟင္း
က ပ် ( ၃ )